सम्झनामा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी – Sadarline
सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाका नाका साँझदेखि खुल्ने
काठमाण्डौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी(लेनिनवादी) को औपचारिक एकीकरणपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इतिहास र ऊर्जाको सम्मिलन भएको टिप्पणी राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएको थियो । त्यो ०४७ पुसको कुरा थियो । त्यसबेला ‘मार्क्सवादी’ लाई मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो र ‘मार्क्सवादी(लेनिनवादी’ को नेतृत्वमा मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो ।
त्यो एकीकरण ऐतिहासिक थियो । यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मूलतः एकीकृत गरेको थियो । अलग(अलग धारबाट अगाडि बढ्दै आएका दुई छुट्टाछुट्टै समूहबीचको एकताले परिवर्तन चाहने आम न्यायप्रेमी जनतामा उत्साह र आशाको किरण छरेको मात्र थिएन, आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई साँचो अर्थमा सम्मिलन गराउने व्यावहारिक कठिनाइ पनि भोग्दै थियो ।
एकीकृत भइसकेको पार्टी जीवनमा सहजताका मुनाहरु पलाउन समय लाग्ने कुरा स्वाभाविक थियो । असहजताले नेतृत्व पंक्तिलाई केही गम्भीर बनाएको थियो र त्यसको घोचाइका दुःखाइहरु पनि सहिरहनुपरेको थियो । नेतृत्वमा रहनुभएका मनमोहन अधिकारी स्वयम् यस किसिमको अनुभव गरिरहनुभएको थियो ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका पृथक(पृथक धारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दुई छुट्टाछुट्टै समूहहरु आ(आफ्नो ‘स्कुलिङ्ग’ का कारण एकीकरणको ऐतिहासिक कामलाई सहज र उपलब्धिपूर्ण बनाउने काममा जुटेका थिए । मनमोहन अधिकारी यो काममा उदाहरणीय बनेर उभिनुभएको थियो ।
पार्टी एकीकरणको लगत्तैपछि मदन भण्डारीका साथमा मनमोहन अधिकारी एकीकरणको सन्देश लिएर देशव्यापी दौडाहामा निस्कनुभयो । आफ्नो वृद्ध शरीरलाई लिएर उहाँ कैयौं दिनको यात्रामा निस्कनुभएको थियो । यो यात्राबाट फर्केपछि एक दिन उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले बुझ्दै गरेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।
उहाँ मुलुककै पहिलो निर्वा्चित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने लगत्तै मेरो डेरामा आउनुभयो । मेरो हात समाउँदै आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार बनिदिन आग्रह गर्नुभयो । मनमोहन अधिकारीको स्वाभाव मलाई त्यसबेला विशेष अचम्मको लाग्यो, जब उहाँ मुलुककै पहिलो निर्वा्चित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने लगत्तै मेरो डेरामा आउनुभयो । त्यसबेला मलाई केही अचम्म र केही अस्वाभाविक पनि लाग्यो । उहाँले आएर मेरो हात समाउँदै आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार बनिदिन आग्रह गर्नुभयो । वहाँको प्रस्ताव सुनेर मलाई त त्यसबेला के बोलुँ( के भनुँ जस्तो भएको थियो ।
त्यसबेला मलाई लाग्यो( मनमोहन अधिकारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा जीवित इतिहास, समृद्ध अनुभवका धनी, उमेर र अनुभवले मेरो पितातुल्य व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार बनिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ, त्यसबेला म के भन्न सक्थें, के बोल्न सक्थें ! मनमोहनले मेरो हात समाएर, मेरा आँखामा हेर्दै भन्नुभएको थियो – ‘हेर्नुस म बुढो मान्छे, खास केही गर्न सक्तिनँ, चलाउने तपाइँहरुजस्ता नौजवानले हो, कृपया म बूढालाई सघाइदिनुस् ।’ मैले तत्कालै त केही भन्न सकिनँ । त्यतिबेला जब मैले आफ्नो अनुहार उठाएर हेरें – मेरा दिवङ्गत पिताको धमिलो अनुहार मेरो आँखा अगाडि नाच्न थाल्यो ।
लाग्यो— अजङगको भारी बोक्दै गरेका मेरा वृद्ध पिता मसित सहयोगका लागि माग गरिरहनुभएको छ । मैले त्यसबेला जवाफ दिएँ( कामको त्यो फिल्डमा मेरो खास अनुभव त छैन, तर म तपाईँलाई सघाउँछु । मैले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार भएर के गर्ने ? खास केही कुरा थाहा थिएन । २(४ दिन त मलाई के गर्ने( कसो गर्ने भई नै रह्यो । अफिस जान थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन विगतमा के(के काम भएका रहेछन्( के कस्ता योजना बनाइएका रहेछन् ? अभिलेखहरु(दस्तावेजहरु के(के रहेछन् ? भनेर खोतलखातल गर्न झन्डै एक हप्ता जति लगाएँ ।
प्राप्त भएका ती सामाग्रीहरुका आधारमा मैले एउटा लिखत तयार पारें र त्यही लिखत(योजना प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई देखाएँ । वास्तवमा त्यो लिखत मैले सल्लाहकार भएर गर्ने कामको मोटामोटी रुपरेखा पनि थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्रीद्वारा दैनन्दिन गरिने कामका सम्बन्धमा, विभिन्न विषय( विज्ञहरुको सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा र प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कामहरुको प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर मैले आफ्नो योजनाको लिखत तयार पारेको थिएँ ।
त्यो लिखत हेरेपछि मनमोहनले खुसी हुँदै भन्नुभएको थियो( ‘मैले सोचेभन्दा पनि राम्रो योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । धन्यवाद दिएर मात्र म चुप लाग्दिनँ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा जुटिहाल्नुपर्छ भनेर म तपाईलाई करकर गरिरहन्छु ।’
वास्तवमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहुन्जेल उहाँको समेत संलग्नतामा तयार पारिएको त्यो अवधारणा(योजनामा रहेर उहाँले काम गरिरहनुभयो ।
मैले सल्लाहकार भएर नियमितरुपमा केही कामहरुमा ध्यान दिने गरेको थिएँ । खासगरी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिनुपर्ने मन्तव्य(वक्तव्यहरुलाई अन्तिम रुप दिने, राजनीतिक महत्व राख्ने भेटघाटमा प्रस्तुत गर्ने विचारलाई व्यवस्थित बनाइदिने, पार्टीले गरेका निर्णय तथा ती निर्णयका आधारमा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णय तथा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे टुङ्गो गर्ने ।
त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयहरुमा भइरहेका कामहरुको अनुगमनको योजना बनाउने तथा यी ठाउँमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुदृढ र व्यवस्थित परिचालन गर्ने आदि । मैले यिनै काममा आफूलाई केन्द्रित गरेको थिएँ । यिनै कामलाई केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय तथा निजी सचिवालयलाई परिचालित गर्न मैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको थिएँ ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने भूमिका र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि सन्तुलित र समन्वयात्मक क्रियाशीलताको आवश्यकता पथ्र्यो । मनमोहन अधिकारी यस विषयमा अत्यन्त सजग हुनुहुन्थ्यो र मलाई यस विषयमा ध्यान र्पुयाउन विशेष निर्देशन दिइरहनुहुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिइने वक्तव्यका सन्दर्भमा मनमोहनले प्रायः सधैं अन्तरविरोधी स्थिति झेल्नुपरेको कतिपय मानिसहरु ठान्थे । एकदिन म उहाँकै ‘बेड रुम’ मा पुगेको थिएँ । उहाँलाई केही विसञ्चो भएको थियो । र, उहाँले मलाई त्यहीँ बोलाउनुभएको थियो । त्यहाँभित्रको स्थिति देखेर मलाई अत्यन्त टीठ लागेर आयो
उहाँको मौखिक भाषण रोचक, धाराप्रवाह र सहज हुने गथ्र्यो, आम स्रोताहरुले पनि यस्तै बुझ्थे । तर प्रधानमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रमहरुमा बोल्दा आधिकारिक, सन्तुलित, सारगर्भित हुनुपर्ने र थोरै पनि असन्तुलित हुनै नहुने मान्यताका आधारमा उहाँले लिखित भाषण पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । मौखिक भाषणमा स्वाभाविक र सहजरुपमा खुल्नुहुने मनमोहन अधिकारी लिखित भाषण पढ्नुपर्दा भने अत्यन्त असहज र खुम्चिएको रुपमा प्रस्तुत हुन पुग्नुहुन्थ्यो ।
त्यसो गरिरहँदा मानिसहरु मनमोहनलाई मौलिकता गुमाएको र अप्राकृतिकरुपमा उभ्याएको व्यक्तिका रुपमा बुझ्न पुग्थे । म स्वयंलाई पनि कतिपटक त लाग्यो( उहाँलाई साह्रै कष्ट झेल्न लगाइँदैछ । अंग्रेजीमा गर्ने मौलिक भाषणमा त मनमोहन साँच्चै राम्ररी खुल्नुहुन्थ्यो, त्यति मात्र होइन( उहाँ त पूर्ण रुपमा खुल्नुहुन्थ्यो ।
यो स्थितिलाई कुनै(कुनै बेला त कटाक्ष गर्दै भन्नु पनि हुन्थ्यो, मनमोहन । लिखित भाषण सकी नसकी पढिसकेर त्यसलाई थन्क्याउँदै अब ‘म आफ्नो भाषण सुरु गर्छु’ भन्न पुग्नुहुन्थ्यो( मनमोहनका स्रोताहरुर सहभागीहरु उहाँको भनाइ सुनेर समर्थनमा हाँस्थे । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मनमोहन अधिकारी कहीं निस्कँदा पनि एकजना स्वकीय सचिव र राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा मलाई प्रायः सधैँ साथमा हिँड्न आग्रह गर्नुहुन्थ्यो । उहाँसित मैले देशभित्र र बाहिरसँगै यात्रा गर्ने अवसर पाएको छु ।
कार्यक्रममा प्रायः सधैं सँगै हुँदा उहाँले कार्यक्रममा बोल्ने वा प्रस्तुत गर्ने विषयका बारेमा छलफल गर्नुहुन्थ्यो – आफ्ना विचार र भनाइलाई सङ्गठित गर्नुहुन्थ्यो, सायद । कुनैबेला त मलाई ती सबै विषय टिपोट गरिदिन आग्रहसमेत गर्नुहुन्थ्यो । सन् १९९५ को जनवरीमा डेनमार्कको कोपनहेगनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रस्तुत गर्ने वक्तव्यमा मलाई सँगै राखेर धेरै विषयमाथि छलफल गरेर मात्र उहाँले अन्तिम रुप दिनुभएको थियो । डेनमार्क, बेलायत, फ्रान्स, चीन, मंगोलिया तथा भारतको औपचारिकरअनौपचारिक भ्रमणका समयमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसित साथसाथ रहँदाका धेरै अविस्मरणीय र प्रेरणादायी संस्मरणहरु मसित सधैं सुरक्षित रहनेछन् ।
एउटा विशेष प्रसंगलाई म कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दिनँ । सधैंझैं मनमोहन अधिकारीले एक दिन सुदुरपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रको भ्रमणका लागि मलाई पनि साथै हिँड्न भन्नुभयो । म तयारीका साथ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवार पुगेको थिएँ । तर, त्यहाँ पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘पढी प्रत्युत्तर पठाउनु पर्ने’ एउटा फाइल मलाई दिँदै भन्नुभयो । यससम्बन्धमा पर्सिसम्म हामीले आफ्नो तर्फबाट ‘रिस्पोन्स’ गरिसक्नुपर्छ, आज तपाई मसँगै नगई यसको अध्ययन गरी प्रत्युत्तर तयार गर्नुहोला । मसित जानुपर्दैन’ । म उहाँले त्यति भन्नु भएपछि म त्यसदिन प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य नेताहरुसित नगई त्यसै फर्केको थिएँ । त्यही हेलिकप्टर काठमाडौं फिर्दै गर्दा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो । तर, चालक किशेन्द्रबहादुर शाहीको कुशलताका कारण उक्त भिषण दुर्घटनामा परी झण्डै १० हजार फिटमाथिको उचाइबाट खसेर पनि मनमोहन अधिकारीसहितको टोली सकुशल रहन सकेको थियो ।
उहाँलाई गम्भीर प्रकृतिको चोटपटक त लाग्यो, तर उहाँहरु सबै बाँच्न सफल हुनुभयो । म अहिले पनि सम्झन्छु, त्यस दिन म पनि त्यही टोलीमा भएको भए के हुन्थ्यो होला ? प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर मैले नौ महिना बिताएँ । त्यो नौ महिना मेरा लागि एकैपटक धेरै कुरा थाहा पाउने, सिक्ने, बुझ्ने अवसर बन्यो । राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहेर थाहा पाउनुपर्ने केही कुराहरु मैले थाहा पाएको थिएँ, बुझेको थिएँ । आफूभित्रका कमजोरी तथा सीमाहरुलाई बुझ्ने मौका पनि मिलेको थियो त्यसबेला । पार्टीगत रुपमा नीति निर्माण गर्ने तथा निर्णय गर्ने विषय जति सहज र सरल हुन्छ( राज्य सञ्चालनमा जाँदा थप जटिलताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीले गरेको निर्णयलाई सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा देखापर्ने जटिलता र अन्तरविरोधलाई थोरै भए पनि देख्ने मौका प्राप्त भयो त्यसबेला ।
वास्तवमा यी सबै कुरा मनमोहन अधिकारीले मलाई आदरणीय गुरु तथा अभिभावक भएर सिकाउनुभएको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदा कस्तो अभावको जीवन धानिरहनु भएको थियो भन्ने कुरा अहिलेका प्रायः सबै नेता, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । १९ वर्षपछि सम्झिँदा पनि सरलता र शालीनता नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मनमोहन अधिकारीले स्थापित गर्नुभएका अत्यन्तै मूल्यवान गुणहरु हुन् भन्ने लाग्छ
एकदिन म उहाँकै ‘बेड रुम’ मा पुगेको थिएँ । उहाँलाई केही विसञ्चो भएको थियो । र, उहाँले मलाई त्यहीँ बोलाउनुभएको थियो । त्यहाँभित्रको स्थिति देखेर मलाई अत्यन्त टीठ लागेर आयो । मैले त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य स्कुलमा शिक्षण पेशामा रही दुःखजिलो गरेर बसेको शिक्षकको कोठामा पुगेको जस्तो लाग्यो । अत्यन्तै सामान्य ओछ्यान, पलङ्गसित नमिल्ने पुरानो झुल, पुराना खालका सरसामान अगाडि देखेर एकछिन त मलाई अचम्म पनि लाग्यो । कोठामा पुगेपछि मलाई मनमोहनले भन्नुभयो – ‘प्रधानमन्त्रीको तलव(सुविधाले यहाँ आउने(जाने मानिसलाई खान दिन पनि नसक्ने भइयो । के गर्ने ? घरकै मान्छेहरु समेत कचकच गर्लान् जस्तो भयो ।’
उहाँका यस्ता कुरा सुनेपछि तत्कालै त मैले केही भनिहालिनँ । खाली ‘हामी सल्लाह गरेर मिलाउँला’ भन्ने जवाफ दिएँ । पछि सचिवालयका साथीहरुसित सल्लाह गरी केही व्यवस्था मिलायौं । हामीले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी तथा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत अतिथि सत्कार विभागका पदाधिकारीहरुसित कुरा गरी प्रधानमन्त्री निवासमा देखिएको त्यो दयनीय अवस्थामा केही सुधार गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं । पछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटिसकेपछि एक दिन जब म काठमाडौंको खड्का भद्रकालीस्थित उहाँको निवास पुगेको थिएँ, त्यसबेला उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो । त्यो दिन पनि म उहाँको बेडरुममै पुगेको थिएँ ।
निजी निवासको उहाँको ‘बेडरुम’ र प्रधानमन्त्री निवासको उहाँको ‘बेडरुम’मा खासै कुनै भिन्नता थिएन । उस्तै सामान्य स्थिति, उस्तै सरलता ! प्रधानमन्त्री पदमा हुँदा र नहुँदामा मनमोहन अधिकारीको जीवनशैलीमा खासै कुनै परिवर्तन आएन, देखिएन । उहाँको अनुपस्थितिका १९ वर्षपछि सझिँदा पनि सरलता र शालीनता नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मनमोहन अधिकारीले स्थापित गर्नुभएका अत्यन्तै मूल्यवान गुणहरु हुन् भन्ने लाग्छ ।
(एमाले महासचिव पोखरेल हाल रक्षा मन्त्री छन)
सदरलाइनडटकम १३ बैशाख, नेपालगन्ज : अनिवार्य अवकास पाउन दश महिना रहेका नेपालगन्ज कारागारका जेलर श्याम लामिछानेलाई काज सरुवा गरिएको छ । उनलाई सल्यान थारमारे इलाका प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरिएको पत्र गृह मन्त्रालयले पठाएको छ । लामो समयदेखि नेपालगन्ज कारागारमा रही निमित्त जेलरकाे रुपमा गर्दै आएका जेलर लामिछानेलाई अकस्मात सरुवा गरिनुका […]
१६ असार २०७८, बुधबार १६:४१